YAHOO ဂျပန်။ JAPAN! | SaleAuto
SaleAuto > အပိုပစ္စည်းများနှင့်အစိတ်အပိုင်းများ GOODS-PARTS > YAHOO ဂျပန်။ JAPAN!
ဂျပန်နိုင်ငံ၏အကြီးမားဆုံးနှင့်အထင်ရှားဆုံးအွန်လိုင်းလေလံပွဲဖြစ်ပါသည်။ လစဉ်သန်းပေါင်းများစွာသောကုန်ပစ္စည်းများဟာဒီလေလံပွဲမှာရောင်းချခြင်းခံရပါတယ်။ လေလံပွဲ၏နှစ်စဉ်ဝင်ငွေမှာဒေါ်လာခြောက်ဘီလီယံရှိပါသည်။သင်ဟာအကုန်လုံးနီးပါးကိုဒီမှာရှာတွေ့နိုင်ပြီးတော့ကျွန်ုပ်တို့ဟာသင်ဝယ်ယူခြင်းကိုကူညီပေးပြီးသင်မှာယူထားသောပစ္စည်းများကိုတတ်နိုင်သလောက်အလျင်မြန်ဆုံးသင့်ထံသို့ရောက်ရှိအောင်ပို့ဆောင်ပေးပါမည်။
ကုန်ပစ္စည်းမျိုးစုံဝယ်ယူနိုင်ပါသည်– ယခုအချိန်တွင်အထင်ရှားဆုံးပစ္စည်းများတွင်နာမည်ကြီးအ၀တ်အထည်များနှင့်အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများကိုဈေးနှုန်းနည်းပါးစွာရရှိနိုင်ပြီးဂျပန်ကားများအတွက်အပိုပစ္စည်းများနှင့်ကလေးအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများအစရှိသည်ဖြင့်။ ဂရုစိုက်ပါ၊ Yahoo ဂျပန်တွင်ပြသထားသောပစ္စည်းများ၏ထက်ဝက်ထက်ကျော်မှာအာမခံများရှိပြီးဈေးနိမ့်၍တရားဝင်ဆိုင်များမှရောင်းချပါသည်။ ထိုဆိုင်များတွင်တရားဝင်လိုင်စင်များရှိပြီးနာမည်ကြီးတံဆိပ်ကုန်ပစ္စည်းများရောင်းချပါသည်၊ သို့သော်အွန်လိုင်းတွင်ရောင်းချသည့်အတွက်ကုန်ကျစရိတ်နည်းပါးအောင်ထိန်းနိုင်ပြီးကုန်ပစ္စည်းများကိုနည်းပါးသောဈေးနှုန်းနှင့်ရောင်းချနိုင်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏စနစ်ကို Yahoo ဂျပန်တွင်ကုန်ပစ္စည်းများရရှိနိုင်ခြင်းရှိ၊မရှိ စစ်ဆေးရန်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
၁။ ၀ယ်ယူသောဈေးနှုန်း(VAT ၈% ကိုဆိုင်များမှပေးသွင်းရပါသည်)။
၂။ပြည်တွင်းအိမ်တိုင်ရာရောက်ပို့ဆောင်ခ(သေးငယ်သောကုန်ပစ္စည်းများအတွက် ၆၀၀—၁၅၀၀ JPY ၊ အမြဲတမ်းဖော်ပြထားပါသည်။)
၃။ ပြည်တွင်းဘဏ်ငွေလွှဲခ( ၄၂၀ JPY)
၄။ ၀န်ဆောင်ခ( ၅% ၊ အနည်းဆုံး ၁၀၀၀ JPY)
အကြွေးဝယ်ကဒ်(သို့မဟုတ်) Paypal အသုံးပြုပြီးငွေပေးသွင်းခြင်းသည်ဝန်ဆောင်ခပေးရန်အတွက်ဖြစ်ပါသည်။
သင်ဟာအကြွေးဝယ်ကဒ်အသုံးပြုပြီးငွေပေးသွင်းလိုက်သည်နှင့်ကုန်ပစ္စည်းစုစုပေါင်းပမာဏ၏ ၅% ကိုပေးဆောင်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ဒီလိုပဲ EMS ၀န်ဆောင်ခကိုလည်းသင့်ပါဆယ်ထုပ်ကျွန်ုပ်တို့သိုလှောင်ရုံရောက်တာနဲ့ပို့ဆောင်ဖို့အလေးချိန်ချိန်ပြီးမှသာအတည်ပြုရပါတယ်။
ဆိုကြပါစို့၊ သင်ဟာပေါ့ပါးတဲ့ကုန်ပစ္စည်းများဝယ်ခဲ့တယ်(ထုပ်ပိုးပြီးအလေးချိန်က ၃၀၀ဂရမ်အောက်နည်းတယ်) ဈေးနှုန်းက ၁၀.၀၀၀ JPY ၊ ဥရောပသို့ EMS နဲ့ပို့ဆောင်ရမယ်။ ဘဏ်ကဒ်ဖြင့်ငွေပေးသွင်းမယ်။
ကုန်ပစ္စည်းဈေးနှုန်း – ၁၀.၀၀၀ JPY
၀န်ဆောင်ခ – ၁.၀၀၀ JPY
ဘဏ်ဝန်ဆောင်ခ – ၄၂၀ JPY
ပြည်တွင်းပို့ဆောင်စရိတ် – ၇၀၀ JPY
နိုင်ငံတကာပို့ဆောင်စရိတ် – ၁၅၀၀ JPY
ကဒ်ဝန်ဆောင်ခ – ၆၈၁ JPY
စုစုပေါင်းကုန်ကျစရိတ် – ၁၄.၃၀၁ JPY
Yahoo ဂျပန်မှာပဲ သင်ကုန်ပစ္စည်းတွေဝယ်ယူနိုင်တာမဟုတ်ပါဘူး။
အိမ်မှာထိုင်နေပြီးဂျပန်မှာဈေးဝယ်ပါ။ ဂျပန်မှကုန်ပစ္စည်းများကိုသင့်အိမ်အရောက်ပို့ဆောင်ပေးပါမည်။
YAHOO ဂျပန်– အခြေခံဗဟုသုတ
Yahoo လေလံပွဲတွင်ပါဝင်ရောင်းချလိုသူသည်ဂျပန်နိုင်ငံတွင်နေထိုင်သူဖြစ်ရမည်ဖြစ်ပြီး ဤနိုင်ငံတွင်မှတ်ပုံတင်ထားသောဘဏ်စာရင်းရှိရမည်။
ရောင်းချသူနှင့်ဆက်သွယ်ခြင်းသည်ဂျပန်နိုင်ငံတွင်သာဖြစ်ရမည်။ ကျွန်ုပ်တို့ဝန်ဆောင်မှုပေးထားသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များသည်ဤလေလံပွဲတွင်ပါဝင်နိုင်ပါသည်။ စတင်ခေါ်ဆိုသောဈေးနှုန်းဖြင့်လေလံပွဲစတင်ပါသည်။အကောင်းမွန်ဆုံးဈေးနှုန်းပေးပြီးလေလံဆွဲနိုင်သူကအနိုင်ရပါလိမ့်မည်။ ကျေးဇူးပြု၍သင်လိုလိုလားလားပေးနိုင်မည့်အမြင့်ဆုံးဈေးနှုန်းကိုဖော်ပြရန်အာရုံစိုက်ပါ။